March 2020 | Save A Train
Fotoana famakiana: 5 minitra Rehefa manao dia lavitra teo amin'ny antokon'i oniversite buddies, dia ekena tanteraka ny tsy manana faritany haleha izy, ary ho tonga ho azy fotsiny. Nitsidika toerana tsy misy fanantenana na drafitra mialoha, raha ny marina ny fomba tsara indrindra ny Nahita Harena Nafenina. It leaves enough room for…
Fotoana famakiana: 5 minitra Eoropa dia an-trano any amin'ny iray nahay ny kolontsaina sy ny tantara mahatalanjona trano, ny ankamaroany izay azony amin'ny alalan'ny be ny kaontinanta ny fanangonana ny toeram-pivavahana. Izany no mahatonga ny amin'izao fotoana izao, dia efa boribory ny 3 fa mandinika ny maha-tanteraka tsy maintsy mahita, manarona trano malaza eran'izao tontolo izao manerana ny sasany…
Fotoana famakiana: 4 minitra Ny fitomboan'ny fironana mankany amin'ny tontolo iainana bebe kokoa ny maha-namana no niteraka maro, ary samy hafa eran-hetsika maitso, amin'ny tanàn-dehibe sy tanàna kely mitovy. One of the many signs of this is the increasing use of renewable energy in people’s everyday life and work in spheres it…
Industrial Engineering, Nandeha lamasinina
Fotoana famakiana: 5 minitra Mandehana amin'ny traikefa nahafinaritra mba hahafinaritra ny tsimon'ny tsiro sy handray anjara amin'ny sakafo tsara indrindra fitsidihana any Eoropa. Raha toa ianao nazoto foodie, ny lanilaniny, ary koa ny Instagram fahana dia nitsambikina fifaliana sy izay ho hiaina. Mazava ho azy, ny fomba tsara indrindra…
Fotoana famakiana: 6 minitra Ny ankehitriny nipoahan'ny Coronavirus fanipazana ny diany rehetra ho korontana tanteraka, dia mety ho sarotra ny hahafantatra raha tokony hitandrina ny vakansy mandritra ny Coronavirus na tsia. While we can’t make that decision for you if you do choose to continue on it’s important…
Fotoana famakiana: 5 minitra Traveling no farany traikefa nahafinaritra, fa tokony hanao izany maimaim-poana entana, indrindra ho an'ireo layovers na raha efa maimaim-poana fotsiny ny andro any amin'ny iray amin'ireo tanàna malaza Alemaina. Izahay dia manana ny fampahalalana rehetra ilainao amin'ireo toerana enta-mavesatra sisa tavela any Alemana mandritra ny telo amin'ny…